Osisi nhazi azụ, Sistemụ Evaporator - Fanxiang
Elu Ogo Nri Nri eriri igwe Pipe Drier
Ihe mejupụtara Drier bụ oghere na -ebugharị ya na kpo oku uzuoku na shei kwụ ọtọ nwere mmiri condensate uzuoku. Iji meziwanye ọsọ ihicha, shei ahụ na -anabata usoro Sanwichi, yana mmiri condensate nke uzu oku ọkụ nke na -agbagharị ...
AJỤJỤ Ọ BỤLA? ANYỊ nwere azịza ya.
ANYỊ NA NZỌZỌ NKE ỌZỌ.
igwe maka ọrụ gị iji nyere gị aka kwụọ ụgwọ ịzụta nke na -ewepụta uru pụtara ìhè.
Ịghasa Press (High Quality ugboro abụọ ịghasa Press Fishmeal Pr ...
Tricanter (High Quality Azụ Oil Azụ Nri Nwepụta Tr ...
Centrifuge (ndị nrụpụta na -ere ahịa centrifuge meach ...
Tubular Condenser (Top Quality tubular Condenser Fishmeal ...
Ndị isi ụlọ ọrụ anyị bụ ndị mere igwe R&D na imepụta ihe karịrị afọ 20. Ogo ngwaahịa na ụkpụrụ teknụzụ erutela ọkwa dị elu nke ngwaahịa ndị yiri ya na China na mba ofesi ka afọ 20 nke teknụzụ na mkpokọta ahụmịhe…